साउनमा साढे ७३ करोड बढीको आलु र टमाटर आयात ! - Arthatantra.com
साउनमा साढे ७३ करोड बढीको आलु र टमाटर आयात !
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को पहिलो महिनामा साढे ७३ करोड बढीको आलु र टमाटर (गोलभेंडा) आयात भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार साउन महिनामा ७३ करोड ६१ लाख ७२ हजार रुपैयाँको आलु र टमाटर आयात भएको छ । साउन महिनामा ७१ करोड ३८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको आलु आयात भएको छ । नेपालमा छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशबाट आलु आयात हुने गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण नेपालमा तारे होटल बन्द हुँदा, सभा सम्मेलन लगायतका धेरै मानिस जम्मा भएर हुने कार्यक्रम न्यून हुँदा पनि भारतीय आलु निकै नै आयात हुने गरेको छ ।
चालु आवको पहिलो महिनामा भारतबाट मात्रै ७१ करोड २७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको २८ हजार २० टन भन्दा बढी आलु आयात भएको हो । यता, बंगलादेशबाट भने १० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको ६३ टन आलु नेपाल भित्रिएको हो । आलु आयातबाट सरकारले ६ करोड ४४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै, साउन महिनामा २ करोड २३ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको टमाटर नेपाल भित्रिएको विभागले जनाएको छ । नेपालमा चालु आवको साउन महिनमा १ हजार ५१३ टन बढी भारतीय टमाटर आयात भएको हो । टमाटर आयातबाट सरकारले २० लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो समय नेपालमा पनि प्रयाप्त मात्रामा टमाटर उत्पादन हुने समय हो ।
नेपालमा उत्पादन हुने सामान पनि विदेशबाट आयातहुँदा करोडौ रुपैयाँ विदेशमा जाने गरेको छ । अहिले पनि नेपालमा नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने र भारत लगायतका देशबाट नेपालमा नै उत्पादन हुने सामान आयात गरेर करोडौ रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ १३ आइतवार १४:०८ मा प्रकाशित
अघिल्लाे यी तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकरात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता कुनको कति बढ्यो ?
पछिल्लाे नेप्सेमा १ लाख ९१ हजार कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत